Voasivan’ny Apple Ao Hong Kong Sy Taiwan Ny ‘China Uncensored’, Fandaharam-baovao Mpaneso · Global Voices teny Malagasy
Voasivan'ny Apple Ao Hong Kong Sy Taiwan Ny ‘China Uncensored’, Fandaharam-baovao Mpaneso
Voadika ny 20 Jona 2017 7:15 GMT
Manadihady ireo mpanao hetsipanoherana ao Mong Kok, ao Hong Kong i Chris Chappell, mpanolotra fandaharana ao amin'ny China Uncensored, nandritra ny Hetsika Elo. 15 Novambra 2014. SARY: Matt Gnaizda/China Uncensored
Ambaran'ilay fandaharam-baovao mpaneso, China Uncensored, fa tsy ireo mpisera avy ao amin'ny tanibe Shina ihany no voasakan'ny tsenanà fampiharan'ny Apple TV tsy hiditra ao aminy fa ireo avy ao Hong Kong sy Taiwan ihany koa.
Notsongain'i Chris Chappell ilay fandaharana, ka nalefa voalohany tao amin'ny Youtube tamin'ny 2012 ary naelin'ny New Tang Dynasty Television (NTD.TV) mifototra ao New-York, izay mifandray amin'ny Falun Gong — fomba fanao ara-pivavahana ravaina ao Shina.
Maneso ny Antoko Kaominista Sinoa sy ny fitondrany tsy refesimandidy ilay fandaharana amin'ny fitsongàny vaovao momba ny famoretana ireo mpanohitra sy ny fanenjehana ireo antokom-pivavahana vitsy an'isa ary ireo hetsika hosoka ataon'ny fanjakana, ka mamadika izany ho tatitra manaraby. Matetika dia fifangaroanà hanihany sy zava-misy marina izay miorina ambony endrika fitsaratsaram-poana an'i Shina tsy refesimandidy ireo tantara ao anatiny.
Nohamafisin'i Chris Chappel tao anatinà fanambaràna an-gazety tamin'ny 5 Aprily 2017 fa:
Azoko tsara ny antony nanakanana anay ao amin'ny tanibe Shina. Mazava be fa manakorontana ny fampielezankevitra mirindran'ny Antoko Kaominista izahay … kanefa tsy tokony ho eo ambany fifehezan'ny lalàna Sinoa i Hong Kong sy i Taiwan.
Na dia ampahan-tanin'i Shina aza i Hong Kong dia manana ny rafi-pitondrany manokana eo ambany fifehezan'ny fitsipiky ny Firenena iray Rafitra roa. I Taiwan kosa indray dia faritra iray mizaka tena hatramin'ny naharesen'ny Kuomingtang-n'ny Repoblikan'i Shina manoloana ny Antoko Kaominista Sinoa ka nandosirany tany amin'io nosy io tamin'ny 1949. Anatin'ireo faritra roa ireo, manana mpitati-baovao mandrakotra ireo vaovao ao an-toerana ny NTD.TV ary malalaka amin'ny fampiharany ny fivavahany ireo mpikambana ao amin'ny Falun Gong.
Tamin'ny Martsa 2017, neken'ny Apple ny fampiasàna ny fampiharana China Uncensored ao amin'ny Apple TV saika manerana izao tontolo izao, saingy nalàny tao anatin'ireo tsenanà fampiharana ao amin'ny tanibe Shina, Hong Kong ary Taiwan kosa izany.
Nolazain'ny ekipan'ny Apple misahana ny lafiny lalàna fa mifanaraka tsara amin'ireo lalàna ao an-toerana ny fanapahankeviny :
Tsy maintsy manaraka ireo fepetra rehetra takian'ny lalàna any amin'izay toerana rehetra ampiasanareo azy ireo fampiharana (raha tsy azonareo antoka, hamarino any aminà mpahay lalàna). Fantatray fa manahirana ity zavatra ity, saingy andraikitrareo ny manakatra izany ka manome antoka fa mifanaraka amin'ny lalàna ao an-toerana ny fampiharanareo […]. Ary mazava ho azy fa holavina ireo fampiharana izay maka fanahy, manentana na mampirisika ny fitondrantena meloka na hita izao fa sahisahy ratsy.
Na dia nalàna tao amin'ny tsenanà fampiharana ao Shina, Hong Kong sy Taiwan aza ny fampiharanareo, dia mbola azo idirana kosa any amin'ireo faritra hafa izay nofantenanareo tao amin'ny iTunes Connect.
Novalian'i Chris Chappell taminà fanontaniana maneso tanatinà fanambarana an-gazety izany:
Matahotra mafy ny Antoko Kaominista Sinoa ve ny Apple ka hanivana ny China Uncensored ao Hong Kong sy Taiwan, sao hoe? […] Sa sahiran-tsaina momba ireo toerana fehezin'i Shina ve ny Apple ka fahadisoana avokoa no nisy? Tokony haka mpahay lalàna angamba ry zareo, tahaka ny nataonay.
Tanatinà taratasy ho an'ny Tale Jeneralin'ny Apple, Tim Cook, tamin'ny 3 Aprily, dia niangavy ny mba hanalàn'ny Apple ny sakana tsy ahafahan'ny China Uncensored miditra ao amin'ireo tsenanà fampiharana ao Hong Kong sy Taiwan i Chappell, ary nampanantena fa vonona ny handray ireo hetsika ara-dalàna sy ara-pôlitika:
…efa naka mpisolovava mpiaro ny tombotsoam-bahoaka izahay mba hisolo tena anay sady vonona hitondra izany any amin'ny biraonà mpisolovava lehibe mba handraisana hetsika ara-pitsaràna, na dia tianay kokoa aza ny hamaha izany olana izany haingana sy tsy misy mpisolovava.
Raha ilaina, vonona ihany koa izahay ny hidinika io olana io miaraka amin'ireo manampahefana federalin'ny Etazonia, izay, raha tsy manana fahefana amin'i Hong Kong na i Taiwan, dia miditra kosa anatin'ireo raharaham-barotry ny Apple amin'ny ankapobeny noho ny fifaninanan'ny Apple eo amin'ny sehatry ny orinasa fahitalavitra.
Hatramin'ny 2013, nanomboka nanala fampiharana — isan'izany ireo boky voarara sy ireo fitaovana fandinganana — tao anatin'ny tsena iTunes-ny ao Shina ny Apple ho fanarahana ny lalàna ao an-toerana.
Tamin'ny volana Jona 2016, nohamafisin'i Shina tamin'ny fampidirana ny Fepetra momba ny Fitantanana ny Sampandraharahan'ny Fampitam-baovao amin'ireo Fampiharana ho an'ny Finday ao anaty Aterineto ny fifehezany ireo fampiharana amin'ny finday. Mandrara ireo fampiharana izay manaparitaka tsaho sy vaovao heverina fa manohintohina ny filaminam-pirenena ireo lalàna ireo. Tamin'ny Janoary 2017, nalàna tao amin'ny tsena iTunes-n'ny Apple ny New York Times noho ny fepetra tahaka ireo. Na izany aza, mbola azo jerena malalaka ao amin'ny tsenan'i Hong Kong sy i Taiwan ilay fampiharana gazety.
Nohamafisin'i Chappell tao amin'ny taratasy ho an'i Cook fa na dia fantany aza ireo famerana ao Shina, dia tsy tokony hitovy amin'izany ny fitantanana ireo tsenan'i Apple ao Hong Kong sy Taiwan:
Tsy isalasalàna, mety ho latsaka ao ambanin'ny sasany amin'ireo sokajin-dalàna mampanahy ao amin'ny tanibe Shina ny China Uncensored, toy ny:
Fanohintohinana ny firaisam-pirenena
Fanakorontanana ny filaminam-bahoaka
Tsy ilaina ny mifanditra mikasika ny fanapahankevitrareo momba ny tsenanà fampiharana ao amin'ny tanibe Shina … kanefa tsy fehezin'ny Antoko Kaominista Sinoa i Hong Kong sy i Taiwan. Faritra manana ny rafi-pitondrany mahaleo tena izy ireo.
Nanatanteraka fanangonantsonia mampirisika ireo mpijery sy mpanohana azy ny China Uncensored tamin'ny 4 Aprily, hiteny amin'ny Apple mba “hanala ny sivana” amin'ny fampiharana China Uncensored ao anatin'ny tsenanà fampiharany ao Hong Kong sy Taiwan. Tamin'ny fotoana namoahana ity tantara ity, maherin'ny 5.800 ireo olona nanao sonia.